महिलाले सधैं गोप्य राख्छन् यी ७ कुरा, ती के हुन् ? थाहा पाइराख्नुस् « Lokpath
२०७६, ६ श्रावण सोमबार १५:४९
महिलाले सधैं गोप्य राख्छन् यी ७ कुरा, ती के हुन् ? थाहा पाइराख्नुस्
प्रकाशित मिति : २०७६, ६ श्रावण सोमबार १५:४९
काठमाडौं । तपाईलाई लाग्न सक्छ आफ्नी श्रीमती र प्रेमिकाले आफुलाई सबै कुरा बताउछिन् ।
तर तपाईंलाई उनीहरुले सबै कुरा बताइरहेकि हुदिनन् । सबै पुरुषले महिलालाई बुझ्न नसक्ने एक अध्ययनले देखाएको छ ।
उनीहरुले एकदमै गोप्य राख्ने केहि कुराहरु हुन्छन् । केहि यस्ता कुराहरु छन् जुन महिलाले सधै गोप्य राख्ने गरेको पाइएको छ ।
१. एक महिलाले अर्की महिलाको डाहा गर्दछन् रिस गर्दछन् तर पुरुषलाई यो थाहा हुदैनकी एक महिलाले अर्की महिलालाई मन पराउछन् । उनीहरुले अर्की महिलाको सौन्द्रर्य र स्टाइललाई शरिरको फिगरबाट फिदा हुने गरेको अध्यनले देखाएको छ ।
२. पुर्व प्रेमी प्रति महिलाहरुले आफनो पुर्व प्रेमीप्रति चासो राख्ने गरेको एक अध्यनले देखाएको छ । महिलाले उनको पहिलो ब्याइफेण्डसंग कुन केटीसंग अफेयर चलेको छ । यो केटी आएपछि केटाको जीवनमा के परिवर्तन हुदैछ भने चियो चर्चा गर्ने गरेको अध्यनले देखाएको छ ।
३.पोर्न फिल्म प्रति चासो तपाईलाई शायद यो कुरा थाहा नहुन सक्छ तर महिलाहरु पोर्न फिल्म हेर्न मन पराउने गरेको अध्यनले देखाएको छ । उनीहरुले लुकी लुकी पोर्न फिल्म हेर्ने गरेको अध्यनले देखाएको छ ।
४.आफनो शरिरलाई माया महिलाहरु आफनो शरिरलाई देखाउन चाहन्छन् ।आफनो शरिर लाई नै मन पराउने गर्दछन् ।उनीहरुले पुरुषहरुलाइ आफनो शरिर देखाएर आर्कषित गर्छन् ।
६.पुरुषको डाहा धेरै महिलाले पुरुषप्रति डाहा गर्ने गरेका हुन्छन् किनभने पुरुषहरु महिनावारी हुदैन , पुरुषलाई नै महिनासम्म बच्चा कोखमा राख्नु पर्दैन , बच्चा जन्माउनु पर्दैन, त्यस बखत हुने पिडा खप्नु पर्दैन जस्ता क्रियाकलापकले महिलाहरु पुरुषको डाहा गर्ने गरेको अध्यनले देखाएको छ ।
७.पुरुष प्रति जासुस महिलाहरु प्राय आफनो जीवन साथीको हरेक कुरामा जासुस गरिरहेका हुन्छन् । पुरुषको धेरै कुरा थाहा पाउनका लागी गोप्य रुपमा जासुस गरेका हुन्छन् ।
अमेरिकामा बढे कोरोना संक्रमित
नेपालीहरु विदेशबाट फर्किने क्रम जारी, हालसम्म कति फर्किए ?
भारतमा जुलाई २० यताकै सबैभन्दा कम संक्रमित
लगातार पाँच म्याच जित्दै पञ्जाव शीर्ष ४ मा, कोलकता ८…